Shirka Madaxda Maamulada ee ku shiray Kismaayo oo lagu wado In la soo gabagabeeyo -
Madaxda Maamulada Soomaaliya ee Maalmahaanba ku shirsanaa kismaayo ayaa Maanta waxaa lagu wadaa in shirkooda ay ka soo saaraan War Saxaafadeed ku saabsan sedaxdii Maalmood ee shirkooda Magaaladaas ugu socda waxa yaabaha ay ugu hadlayeen.
War Aan si hoose uhelnay ayaa waxaa uu sheegayaa in ay Taageero umuujiyeen Madax weynaha Xilkiisa wali lagu muran san yahay ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf in Baarlamanakii Xilka ka qaaday Sharciga ay Baalmareen.
Waxaa intaas dheer waxay ku guda jiraan in ay sameyntaan Gole ay ku midaysan yihiin Madaxda Maamul Goboleedyada shanta ah ee Hoose yimaada Dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Dhinaca kale Waxaa Magaaladaas ku wajahan Ergayga Gaarka ah ee QM ee arimaha Soomaaliya Michael keating waxaana wararka intaas raacinayaan in keating uu eegayo waxa ay soo saarayaan madaxda Maamulada.
Wixii ku soo kordha waan idiin soo gudbinaynaa in sha,allaah laga socda Tusmotimes.com
Related Items:Featured, Shirka Madaxda Maamulada ee ku shiray Kismaayo oo lagu wado In la soo gabagabeeyo